Izindaba - Amathiphu Amancane kuma-SPL Evaporative Condensers
Ungenzi noma iyiphi isevisi noma eduze kwabalandeli, ama-motors, noma amadrayivu noma ngaphakathi kweyunithi ngaphandle kokuqinisekisa kuqala ukuthi abalandeli namaphampu bayanqanyulwa, bavalelwe ngaphandle, futhi bamakiwe.
Hlola ukuqinisekisa ukuthi ama-fan motor bearings ahlelwe kahle ukuvimbela ukulayishwa kwezimoto.
Ukuvuleka kanye / noma ukuvinjelwa okucwilisiwe kungabakhona ezansi komcengezi wamanzi abandayo. Qaphela lapho uhamba ngaphakathi kwale mishini.
Indawo engaphezulu evundlile yeyunithi ayihloselwe ukusetshenziswa njengendawo yokuhamba noma indawo yokusebenza. Uma ukufinyeleleka phezulu kweyunithi kuyadingeka, umthengi / umsebenzisi-msebenzisi uyaxwayiswa ukuthi asebenzise izindlela ezifanelekile ezihambisana nezindinganiso zokuphepha ezisebenzayo zeziphathimandla zikahulumeni.
Amapayipi wokufafaza awakhelwanga ukuxhasa isisindo somuntu noma asetshenziswe njengendawo yokugcina noma yokusebenza kunoma iyiphi impahla noma amathuluzi. Ukusetshenziswa kwalezi zinto njengokuhamba, ukusebenza noma ukugcina indawo kungahle kulimaze abasebenzi noma kulimaze imishini. Amayunithi anezinto zokuqeda ukukhukhuleka akufanele ambozwe ngoseyili wepulasitiki.
Abasebenzi bavezwe ngqo ku-airstream yokukhipha kanye ne-drift / mists ehambisanayo, ekhiqizwa ngesikhathi sokusebenza kohlelo lokusabalalisa amanzi kanye / noma abalandeli, noma izinkungu ezikhiqizwa amajethi wamanzi anomfutho ophakeme noma umoya ocindezelweyo (uma usetshenziselwa ukuhlanza izingxenye zohlelo lwamanzi olujikelezayo) , kumele ifake okokuvikela ukuphefumula okugunyazelwe ukusetshenziswa okunjalo ngabaphathi bakahulumeni kwezokuphepha kanye nezempilo.
Isifudumezi sesitsha asenzelwanga ukuvimbela uqweqwe lukashukela ngesikhathi sokusebenza kweyunithi. Ungasebenzisi isifudumezi sesitsha isikhathi eside. Isimo esisezingeni eliphansi loketshezi singenzeka, futhi uhlelo ngeke luvaleke okungahle kulimaze i-heater neyunithi.
Uyacelwa ukuthi ubheke umkhawulo wamawaranti kwiphakethe lokuhambisa elisebenza futhi elisebenza ngesikhathi sokuthengisa / ukuthengwa kwale mikhiqizo. Okuchazwe kule bhukwana yizinsizakalo ezinconyelwe ukuqala, ukusebenza, kanye nokuvala, kanye nobubanzi besilinganiso sinye.
Amayunithi we-SPL ngokuvamile afakwa ngokushesha ngemuva kokuthunyelwa futhi amaningi asebenza unyaka wonke. Kodwa-ke, uma iyunithi lizogcinwa isikhathi eside ngaphambi noma ngemuva kokufakwa, kufanele kuthathwe izinyathelo ezithile zokuqapha. Isibonelo, ukumboza iyunithi ngoseyili wepulasitiki ocacile ngesikhathi sokugcina kungabamba ukushisa ngaphakathi kweyunithi, okungadala ukulimala kokugcwaliswa nezinye izinto zepulasitiki. Uma iyunithi kufanele imbozwe ngesikhathi sokugcinwa, i-opaque, tarp ekhanyayo kufanele isetshenziswe.
Yonke imishini kagesi, yemishini, futhi ejikelezayo iyizingozi ezingaba khona, ikakhulukazi kulabo abangajwayele ukwakheka kwabo, ukwakhiwa nokusebenza kwabo. Ngakho-ke, sebenzisa izinqubo ezifanele zokukhiya. Izindlela zokuvikela ezanele (ezibandakanya ukusetshenziswa kwezindawo zokuvikela lapho kunesidingo) kufanele zithathwe ngalezi zinsiza ukuvikela umphakathi ekulimaleni kanye nokuvikela ukulimala kwempahla, uhlelo oluhambisana nayo kanye nezakhiwo.
Ungasebenzisi owoyela abaqukethe okokuhlanza ukuthwala i-lubrication. Amafutha wokugeza azosusa i-graphite emkhonweni ophetheyo futhi abangele ukwehluleka kokuthwala. Futhi, ungaphazamisi ukuqondaniswa kokuqina ngokuqinisa ukulungiswa kophiko othwele kuyunithi entsha njengoba kulungiswa torque efektri.
Le mishini akufanele isetshenziswe ngaphandle kwazo zonke izikrini zabalandeli, amapaneli wokungena, neminyango yokungena ekhona. Ukuvikela insizakalo egunyaziwe nabasebenzi bokunakekela, faka iswishi enqanyulekayo yokunqamula etholakala ngaphakathi kokubona kweyunithi kufeni ngayinye nakumshini wokumpompa ohambisana nale mishini ngokwesimo esisebenzayo.
Izindlela zemishini nezokusebenza kufanele zisetshenziselwe ukuvikela le mikhiqizo ekulimaleni kanye / noma ekunciphiseni ukusebenza ngenxa yokuvalwa okungenzeka kube khona.
Ungalokothi usebenzise izincibilikisi ze-chloride noma i-chlorine ezifana ne-bleach noma i-muriatic (hydrochloric) acid ukuhlanza insimbi engagqwali. Kubalulekile ukugeza ubuso ngamanzi afudumele bese usula ngendwangu eyomile ngemuva kokuhlanzwa.
Imininingwane Yesondlo Esijwayelekile
Izinsizakalo ezidingekayo ukugcina isiqeshana semishini yokupholisa evaporative ngokuyinhloko umsebenzi wekhwalithi yomoya namanzi endaweni yokufakwa.
EMOYENI: Izimo ezisemkhathini eziyingozi kakhulu yilezo ezinenani elingajwayelekile lentuthu yezimboni, intuthu yamakhemikhali, usawoti noma uthuli olusindayo. Ukungcola okunje okuphefumulwa ngumoya kufakwa emishini futhi kufakwe emanzini aphindaphindayo ukwakha isixazululo esonakalisayo.
AMANZI:Izimo eziyingozi kakhulu ziyakhula njengoba amanzi ehwamuka entweni yokusebenza, kushiya okuqinile okuncibilikisiwe ekuqaleni obekuqukethwe emanzini okwakheka. Lezi zinto eziqinile ezincibilikisiwe zingaba yi-alkaline noma i-acidic futhi, njengoba zigxile emanzini ajikelezayo, zingaveza ukukala noma ukusheshisa ukugqwala.
l Ubungako bokungcola emoyeni nasemanzini kunquma imvamisa yezinsizakalo eziningi zokulungisa futhi kulawula nezinga lokuphathwa kwamanzi okungahluka kusuka ekuphathweni kwegazi okuqhubekayo nokulawulwa kwezinto eziphilayo kuye ohlelweni lokwelashwa okuyinkimbinkimbi.